Ndụmọdụ Pipette, PCR Consumables, Reagent Bottles - ACE
Nweta nnwale efuGaa
Z Suzhou ACE Biomedical Technology Co., Ltd. bụ ọkachamara ụlọ ọrụ gbara mbọ na-enye elu àgwà disposable ọgwụ na laabu plastic consumables eji n'ụlọ ọgwụ, clinics, diagnostic labs and life sayensị research labs.
♦ Anyị nwere ahụmịhe dị ukwuu na nyocha na mmepe nke plastik sayensị ndụ ma na-amịpụta ihe oriri na ọ mostụ environmentalụ gburugburu ebe obibi na ndị ọrụ kachasị eji eme ihe. A na-emepụta ngwaahịa anyị niile na klas nke 100,000 ụlọ ọcha. Iji hụ na nke kacha mma mma na-ezukọ ma ọ bụ karịa ụlọ ọrụ ụkpụrụ, anyị na-eji naanị ndị kasị elu àgwà na-amaghị nwoke ngwaọrụ na-eme ka anyị na ngwaahịa…
Ọkachamara na elu-quanlity ọgwụ na biolab akụkụ
Atụmatụ Pipette Universal
Hamilton STAR CO-RE ndụmọdụ
96 Ọfụma PCR
Tecan LiHa RSP ND TMỌD.
Tecan MCA Atụmatụ
350ul 96 Gburugburu nke ọma efere V ala
350ul 96 Gburugburu nke ọma efere U ala
96 Ndụmọdụ Combs
Kemgbe ọ malitere, ACE agba mbọ rụpụta ma nyefee ndị ahịa anyị ọgwụ na ahụike na ahụike kachasị mma.
1. Tụkwasịnụ elu mmepụta technology
2. Nye mpi kwuru
3. Nye ndị magburu onwe mgbe-sales ọrụ
Ejiri ndị injinia nwere ahụmịhe mebere ngwaahịa anyị niile.
Ndị ahịa anyị n'ihe karịrị mba 20.
OEM Ọrụ na AKW AKWỌ
Ebu / ngwaọrụ
SHlọ ahịa ahịa
kacha ọhụrụ ozi
ACE Biomedical na-enye ọtụtụ microplates miri emi nke ọma na-enweghị isi maka ngwa nyocha ọgwụ na ọgwụ. Igwe microplates miri emi bụ otu ihe dị mkpa nke plastik arụ ọrụ eji eme ihe maka nkwadebe, nchekwa nchekwa, ịgwakọta, njem na mkpokọta mkpụkọ. Ha ...
Do ẹdụk pipet ...
Na laabu, a na-eme mkpebi ndị siri ike iji chọpụta otú kacha mma isi mee nyocha na nyocha dị oke egwu. Ka oge na-aga, ndụmọdụ pipette na-emegharị ka ọ kwekọọ na labs gafee ụwa ma nye ngwá ọrụ ka ndị ọkachamara na ndị ọkà mmụta sayensị nwee ike ịme nchọpụta dị mkpa. Nke a dị oke mkpa ...
Ndi Igwe Igwe ...
Ndị ahụ temometa ntị infrared ndị na-ewu ewu nke ukwuu na ndị ọkachamara ụmụaka na ndị nne na nna na-adị ngwa ma dịkwa mfe iji, mana ha ziri ezi? Nyochaa nyocha ahụ na-atụ aro na ha nwere ike ọ gaghị adị, na ọ bụ ezie na mgbanwe dị iche iche nke okpomọkụ pere mpe, ha nwere ike ime mgbanwe na otu esi emeso nwata. Resea ...